Jose Mourinho oo si weyn u amaanay AFAR ciyaaryahan, kadib kulnkii Arsenal – Gool FM
Antonio Conte oo durba bilaabay inuu kashifo ceebaha ciyaartoydiisa & xiddiga ay markaan luqunta iskula jiraan.
KASHIFAAD – Waa Kuma xiddigii ugu adkaa abid ee uu garoonka ku wajahay Antoine Griezmann??
Jose Mourinho oo si weyn u amaanay AFAR ciyaaryahan, kadib kulnkii Arsenal
(Manchester) 06 Dis 2018.Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa amaanay afar ciyaaryahan ka dib markii ay kooxda Manchester United ay barbaro 2-2 ah la gashay Arsenal kulankii xalay ka dhacay garoonka Old Trafford, kaasoo ka tirsanaa kulamada 15-aad ee horyaalka Premier League.
Laba gool ay kala dhaliyeen xidigaha Anthony Martial iyo Jesse Lingard ayay kooxda Manchester United kaga heshay Arsenal barbaro, xili ay Gunners 2 jeer hogaanka u qabatay ciyaarta, inkastoo Mourinho uu sheegay inay jireen qaladaad badan, hadana wuxuu ku amaanay ciyaartoydiisa dadaalkii ay bixiyeen.
“Waxaa jira waxyaabo muuqda, laakiin mar kale ayuu qaab ciyaareedkeena kor u kacay, goolka labaad ayaa yimid daqiiqad aad u xun marka loo fiiriyo in aan ku jirnay qaab ciyaareed fiican”.
“Laakiin waxaan ku faraxsanahay ruuxda, go’aanka iyo geesinimada, aad ayaan ugu faraxsanahay arintaas”.
“Qaab ciyaareedka wanaagsan ee qaar ka mid ah ciyaartoyda ayaa naga yareeysay cadaadiska kooxda kale, waxay ahayd bilaabashadii ugu horeesay ee Dalot iyo Marcos Rojo ee xili ciyaareedkan, Eric Bailly sidoo kale wuxuu maqnaa 2 bilood, Smalling wuxuu ahaa geesi”.